ဝိပဿနာ အားထုတ်သင့်ကြောင်း	Posted on October 25, 2009	by mettayate စလင်းကန်လယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက –
၅) ဘ၀ပေါင်းများစွာက ဆုတောင်းလာကြတဲ့ ဆုထူးပန် အဓိပတိ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေသာ ကျင့်ရင် မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန် ရနိုင်တာ၊ တို့များ ငနုံငမွားတွေနဲ့ မထိုက်တန်ပါဘူးဟု လွှဲချနေကြသူ ဖြစ်၏။ ဤသူများ တိရစ္ဆန်ဘုံုံ့ စဉ် စံမည်။ မဂ် ဖိုလ် မရ ဟု ဆိုလို၏။
This entry was posted in ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← ပါရမီ လို မလို